IINGCAMANGO EZINGAMA-65 ZEPATIO YOYILO-IMIFANEKISO KUNYE NOKUHOMBISA UKUPHEFUMLELWA - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Iingcamango ezingama-65 zePatio yoyilo-Imifanekiso kunye nokuHombisa ukuphefumlelwa
Wamkelekile kwigalari yethu yemibono yoyilo yepatio. Iipatios zinokunyusa kakhulu ukubanzi kwekhaya lakho kwaye zibonelele ngeendawo zokuhlala kunye nokuhlala kunye neendwendwe kunye nosapho. Baninika ithuba lokonwabela indawo yegadi, bathathe indawo yokujonga, kwaye batye ngaphandle. Nokuba unendawo encinci yepatio yangaphandle, ithala eliphezulu lophahla, okanye indawo evulekileyo ebanzi kukho iindlela ezahlukeneyo zoyilo lokudala ukubuyela kwakho ngaphandle. (Jonga eli phepha Izimvo zomgangatho weenkuni )
Ezinye zeentlobo ezithandwayo zeepatio zibandakanya igadi, iphuli, ikhonkrithi, ilitye, izitena kunye nokutya. Bahlala benezinto ezifana ne-barbecue, ikhitshi langaphandle, iimpawu zamanzi, iindlela, umlilo, indawo yokucima umlilo, i-gazebo, i-pergola, i-canopy kunye nefenitshala ekwazi ukujongana neemeko zemozulu ezahlukeneyo. Xa usenza uyilo lwepatio yesiqhelo kukho amathuba angenasiphelo ngokusekwe kubume beendawo, ubungakanani, izinto ezifunwayo, kunye nokwakha uhlahlo-lwabiwo mali.
Kumfanekiso ongentla ipatio entle ene-octagonal enembono entle isebenzisa i-aesthetics ephefumlelweyo yelizwe. Umgangatho ziithayile zeceramic ezingatyibilikiyo kwiorenji ekhanyayo, kunye neethayile zekheram yomda ogqamileyo obomvu. Isilingi sisebenzisa iiplanga zemvelo zemephu endaweni yepeyinti. Imithi yesundu ebunjiweyo ibekwe ecaleni kweendonga ukuze izise ukuziva okutropiki kwindawo.
Izimvo zangaphandle zePatio
Iingcamango zomgangatho wePatio
Iingcamango zophahla lwePatio
Kubalulekile ukuba ipatio yakho yenziwe ngezinto ezifanelekileyo ukuze ufezekise indawo engaphandle ehlala ihleli kwaye ibonakala intle. Zininzi izinto ezahlukeneyo ezinokufakwa kufutshane kwiipateni kunye nemibala yokudala ipatio yakho. Nazi izinto ezimbalwa ezithandwa kakhulu ezisetyenziselwa imibono yangaphandle yepatio:
Ilitye leflegi Zombini ezi mpawu zayo kunye nombala wenziwe ngokwenkqubo yendalo apho wenza ngokuthe ngcembe kwaye ngokuthe ngcembe ukuqokeleleka kweengcamba zamaminerali, udongwe, isanti, kunye neentsholongwane. Imibala ethandwa kakhulu ekhoyo iblue, ebomvu, kunye ne-buff. Inkangeleko yolu hlobo lwezixhobo inene ngumhlaba kwaye ayiphelelwa lixesha. Ubungakanani bayo nokumila kwayo akuqhelekanga kwaye ezi kunzima ukusebenza nazo. A ipatiyo yelitye iza kwiindidi ezahlukeneyo, ezizezi zebluestone, ezinokuqina ngakumbi ezifuna ukutywina ukugcinwa kombala. Olunye ukhetho oludumileyo sisandstone, eshushu kwaye esengozini yokonakaliswa kwamanzi. Kubalulekile ukuba uyilo olusebenzisa ilitye leflegi lube nomsele owaneleyo ngenxa yotyekelo lokwahlulahlula kunye nokhukuliseko lomhlaba.
yimalini oyichitha kwiintyatyambo zomtshato
IPatio Pavers -Ineentlobo ezahlukeneyo kubandakanya ikhonkrithi, ilitye, udongwe, kunye neeplastikhi ezenziwe ngokutsha. Ukuze ipatio ihlale ixesha elide ngombala ongacacanga, kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe ikhonkrithi okanye iipavumente zamatye. Iipatios zamatye Ulondolozo lwasimahla lwenza ukuba lube lukhetho oluqinileyo kuyilo lwasemva kwendlu. Ukuze ugcine ubume bepatio, qiniseka ukufakela ukufakwa kwepavile usebenzisa umda weemithi eziphathwa ngoxinzelelo.
Isitena sodongwe -Ibonelela ngobuhle obuzalisekisayo bobabini beli kunye nobugcisa bemveli. Ngokwesiqhelo, izitena ziyakwazi ukugcina umbala ofudumeleyo notyebileyo ngenxa yobunzima bayo obuluncedo kunye nobukhulu. Iipatios zezitena inokufakwa njengeprojekthi ye-DIY ngaphandle kokufumana amava. Izitena ziyahlukahluka kwiipateni ezijikelezileyo okanye eziziingxande kwaye zinokusetyenziselwa iindlela ezahlukeneyo zokuyilwa.
Utyando -Ingafakwa ngokukhawuleza kwaye kulula kwaye iza kwiindidi ezimbini ezityunyuziweyo ngamatye kunye nelitye lomlambo. Igravel iyakuthintela ukukhula kokhula kwaye ibonelele ngomsele ogqwesileyo xa ufakwe kwilaphu lomgama welaphu. I-Gravel ingasetyenziswa kwizitiya okanye kwiiyadi kodwa ikwafuna ulondolozo oluphezulu njengoko ikhathazwa ngamatye enza ukuba kubenzima ukuyigcina ikwindawo kunye nomgangatho wayo. Iipatios zeGravel kukwabiza kakhulu ukwenza nokwenza iprojekthi elungileyo ye-DIY yomntu ngaphandle kwamava okwakha.
Ukonwabela iPatio konke malunga nokwandisa izimvo zakho kunye nokuthatha indawo engqongileyo. Ndiyathemba ukuba, iingcinga zoyilo lwepatio kunye nemifanekiso efumaneka kweli phepha iyakunceda ukukhuthaza ukuba wenze indawo efanelekileyo yangaphandle yencasa yakho kunye nendlela ophila ngayo.
Kule patio evulekileyo ngaphandle, iithayile zepavumente ezingama-30 × 30 zazisetyenziselwa ukutyibilika, kunye nokugrumba okwenziwe ngekhonkrithi. Izinyuko ezingaphandle zineeplati zeenkuni eziphathwe ngemozulu ngamanyathelo ayo kunye nomda weebhokisi zezityalo. Iintyatyambo ezintle zeBougainvillea zenza umva mhle ngasemva kwendawo yokuhlala.
Indawo egubungele i-zen-like patio isebenzisa imo yemozulu eqinisekisa ubume bemozulu ngombala ongwevu, inegrabile kunye namatye amdaka egadi engaphandle. Iindonga zikwapeyinti ngombala ongwevu okhanyayo. Isitayile esincinci kakhulu sisetyenziselwa ukubonelela ngemeko yokuphumla kunye nentuthuzelo.
Ulwandle lolwandle olugqibeleleyo lokuyila izimvo zepatio. Indawo yepatio yolwandle / ibhalkhoni isebenzisa iiplanga ezenziwe ngomthi kumgangatho wayo, emva koko iqhubeke le nto ithe tyaba kwiindonga zayo ngeebhodi zokuhombisa ezithe tyaba ngombala okhanyayo kunye neeaveves ezineebhodi zemikhumbi ezipeyintwe ngombala ofanayo.
Le patio yegadi igcina ilizwe lakudala liziva ngathi linamabala amnyama abomvu bendalo ngokwendlela yokusika koxande. Oku kuzaliswa yibhodi eqatywe umbala oluhlaza okwesibhakabhaka yendlu kunye nokubumba kwayo okumhlophe kunye nokusika.
Le patio intle ivuleke ngamatye amakhulu endalo anika inkangeleko yothando ngakumbi kunye ne-trellis yayo emhlophe emhlophe kunye nemidiliya ehambahambayo ukubonelela ngomthunzi. Iziqwenga zefanitshala zisebenzisa i-aluminium ephathwayo kunye nezinto zokwenziwa kwezihlalo zayo eziphothiweyo.
Le patio intle igqunyiweyo isebenzisa izakhelo ezibomvu zezitena kwimigangatho yayo ukunika ukubukeka kweklasikhi. Ukugcwalisa imigangatho yayo, ngaphandle kwendlu kunxitywe ngamatye aqingqiweyo okwakhiwa kwendalo aneentsika zomthi ezibonakalisiweyo kunye nemiqadi ngombala wendalo kunye nokugqitywa. Isilingi sisebenzisa iiplanga zemithi ephathwe yimozulu endaweni yokupeyinta. Indawo enkulu yokubasa umlilo yenza umtsalane ebusuku.
Indawo ebanzi yepatio esebenzisa kuphela ikhonkrithi egalelwe ipolishi kwimigangatho yayo kunye neetayile zokwenza izinto ngomlilo ngaphandle. Iindonga kunye nesilingi zipeyintwe nge-beige ekhanyayo kunye ne-beige emnyama.
Lo mmandla we patio ugqunyiweyo usebenzisa iithayile zentsimbi zokwakha imigangatho yazo kunye neepropathi ezichasayo, zidityaniswe nesiseko sekhonkrithi esenziwe ngamatye ngemiqadi yekonkrithi kunye neentsika, ezenziwe ngendlela yokuba zibukeke njengomthi zipeyintwe kumnyama omnyama. Ifenitshala isebenzisa iirattan zokwenziwa kunye namalaphu afanelekileyo angaphandle.
Kule patio ivulekileyo, igrey emnyama egalelwe iterrazzo yayisetyenziswa njengesixhobo sayo sophahla. Oku kuncediswa yifenitshala yale patio yanamhlanje esebenzisa ilattan eyenziweyo kunye nelaphu lokungqinisisa amanzi kunye nokwenza izinto zangaphezulu.
Indawo engxowankulu engaphandle isebenzisa imigangatho yamatye asikwe ngokwendalo ngokudibanisa nokufakwa kwamatye okwakhiwa kwamatye okusetyenziswa kwiikholamu zayo eziveziweyo nakwindawo engaphandle yebar. Indawo yaseJacuzzi isebenzisa iithayile zemibala ngombala omnyama ongwevu.
Le patio yegadi ivulekileyo entle inendawo entle yomthombo, enelitye lekalika elikhulu elisikiweyo elisemgangathweni kunye nekhrim enombala wamatye asikiweyo angaphandle kwesakhiwo. Iifestile kunye neengcango zisebenzisa umthi omnyama wengue obonakalayo kwiindonga zelitye elimbala ukhilimu.
Uyilo lwepatio lwale mihla oluvulekileyo kakhulu olusebenzisa ukusikwa okukhulu kweethayile zamatye endalo ngonyango oluchasayo. Ibhentshi eyakhelwe-ngaphakathi kunye ne-firepit nazo zigutyungelwe kuhlobo olufanayo lwezinto, ngelixa iindonga zangaphandle kwesakhiwo zisebenzisa ama-30 × 30 amaqhekeza eTuscan Quartz.
Ipatio entle egutyungelwe echibini, kunye nomgangatho ophakamileyo ogutyungelwe ngezinto zokuhombisa ze-PVC ezenziwe zafana neenkuni zokwenyani. Uphahla lwophahla lwepatio luboshwe ngamaplanga eTeak, ngelixa ichibi lecala lisebenzisa i-gray Terrazzo kunye neethayile zemida yelitye elijikeleze iphuli yokubhukuda.
Indawo yale patio inendawo yokutyela yangaphandle ejonge echibini elinamanzi amdaka kunye nengxangxasi evela kwindawo eshushu yebhafu. Ipatio yonyusa umbono oncomekayo weentaba ezijikelezileyo kunye nokuma okumnandi kwetropiki. Ifenitshala eyahlukeneyo yangaphandle ibonelela ngendawo yokuhlala eyaneleyo kunye nethuba lokubuka iindwendwe.
Umbono omangalisayo wendalo unokubonwa kule balcony patio. Imigangatho isebenzisa ukuhonjiswa kwePVC kwisiphelo seCherry Wood, ngelixa iziporo zisebenzisa iglasi ecace gca ukubonelela abasebenzisi bayo ngombono ngaphandle kothintelo.
Le balcony iphefumlelweyo yelizwe inombono omangalisayo wolwandle. Imigangatho ilula - yenziwe ngerhabaxa, igalelwe ikhonkrithi kwaye ipeyintwe ngaphezulu ngepeyinti emnyama engatyibiliki epoxy. Iziqwenga zefanitshala zisebenzisa ialuminiyam enganyangekiyo yemozulu enamalaphu amelana namanzi ezihlalo / izinto zokwenza izinto. Umgodi womlilo olula kunye neetafile zetayile-phezulu, izitulo eziphakanyisiweyo kwipatheni yesetyhula yindawo enomtsalane yokuphumla kunye nokuhlalisana ngelixa wonwabela umbono.
Ipatio esemva kwendlu esebenzisa iibhloko zamatye endalo kwiithoni ezahlukeneyo zomgangatho wayo, kunye ne-trellis enganyangekiyo yemozulu. Indawo yokucima umlilo yangaphandle yenziwe ngamatye amatye kunye nobukhulu obahlukeneyo bamatye. Zonke iifenitshala zefanitshala ziyanyangeka kwimozulu, zenziwe nge-synthetic rattan kunye nesakhelo sesinyithi, esenziwe ngelaphu elinganyangekiyo ngamanzi.
Le ndawo enkulu yebhayi evulekileyo isebenzisa amatye angwevu angwevu kwipateni yebhondi esebenzayo. Indawo yomlilo isebenzisa iithayile ezibomvu zezitena ekubambeni kwayo ngeebhanti zomthi kunye ne-clapboard-clad eaves.
Le khitshi yangaphandle kunye nendawo ye-barbecue inesakhiwo setyhula sokumisa isitena embindini, esidityaniswe namanqwanqwa kubungakanani obuninzi bokugubungela umgangatho. Indawo yayo ibharhwe ngamatye okwakha amatye endalo kwaye ifakwe kwitrititi yezixhobo.
Indawo yale patio yanamhlanje isebenzisa indawo emhlophe engatyibilikiyo yodongwe. Iindonga zangaphandle kwendlu zipeyintwe ngombala omdaka, ngesilingi enxitywe ngamaplanga ekugqityweni kweenkuni ze-wengue, ivarnished ukufikelela kwisiphelo esimenyezelayo.
Indawo egudileyo yegadi eneeplanga zomthi ezomileyo kunye neziporo zomthi ezibonisa imozulu. Isebenzisa izihlalo ze-cafe aluminium kunye netafile enesambulela esakhelweyo. Ingaphandle lendlu lipeyintwe ngombala we-beige okhanyayo, kunye neengcango kunye neefestile ezimhlophe.
Le patio intle yekhabini yehlathi ingqonge uhlaza kunye nendalo. Imigangatho yeyomthi ococekileyo ohlanjwe mhlophe, kunye nebhentshi eyakhiwe ngebala emhlophe. Iindonga zekhabini zenziwe ngeplanga ethe nkqo yomthi oqinileyo kunye nokugqitywa kwepeyinti ekhanyayo. Indawo yokuphekela / yokulungiselela isebenzisa iithayile zeceramic kwindawo yayo yokusika kunye neengcango zekhabhathi zeTeak.
Le patio yanamhlanje igcina iphalethi yombala elula necacileyo. Isebenzisa ithoni enye yomthi kuwo onke amaplanga ayo, edityaniswe neendonga ezimhlophe zangaphandle kwendlu. Imigangatho yendawo yepatio yindawo yokubonisa imeko yemozulu, ngelixa iikholamu, iitrasi kunye nophahla lweeves zisebenzisa nemithi ye-teak ephathwe yimozulu ngendlela efanayo.
Eli patio lilula lisebenzisa i-mahogany deck deck floor kunye ne-PVC yemfihlo yesikrini kunye noyilo oluhlatyiweyo kunye nokubiyelwa kwesinyithi. Ingaphandle yesakhiwo igqityiwe ngezitena ezibomvu kwipateni yebhondi ebalekayo. Izingqengqelo zangaphandle ezinomtsalane kunye nezitulo zenziwe njenge-wicker ye-resin eyenziweyo yomibini iyamelana nemozulu kwaye inesitayile.
Indawo evulekileyo yepatio enendawo yomlilo edityaniswe ngeethayile zobugcisa. Ingaphandle lendlu kunye ne-arch yokungena ikwasebenzisa uyilo olufanayo lweetayile zokwakha. Imigangatho yeyekhonkrithi enemibala kumbala we-terracotta enesitayile sekhonkrithi etyiweyo kunye namatye omlambo.
Amatye endalo acocekileyo ngombala okhanyayo we-beige agquma udonga lwangaphandle lwale ndlu, kunye neethayile ezinkulu zamatye endalo kumthunzi oluhlaza-grey. Isilingi yepatio isebenzisa iiplanga ezenziwe ngeplanga kumbala omhlophe ogqamileyo, ozaliswa ngumngundo omhlophe qhwa. Uninzi lwabalandeli bokuhombisa banceda ukugcina indawo ipholile. Ifenitshala yentsimbi eyenziwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe inika esi sithuba ukubonakala kwendabuko.
Ipatiyo yebhalkhoni enembonakalo entle yolwandle, isebenzisa izinto ezomeleleyo ezinyangiweyo zemozulu kwimigangatho yayo, kwaye iyaqhubeka nale patheni ithe tyaba ukuya eluphahleni olunamaplanga enziwe ngobunjineli ekugqityweni komthi weCherry. Izibambo zisebenzisa iinkuni zeCherry, kwaye kwitafile enkulu yokutyela yenziwe ngomthi osikiweyo wendalo. Itafile ezenziwe ngesiko ezenziwe kwilogo yomthi yakudala zenza indawo ephambili enomdla.
Lo mmandla wepatio opholileyo unemigangatho ebomvu ebomvu e-Oak inyangelwe ukumelana namanzi kunye neentubi. Iindonga zayo zipeyintwe ngombala omhlophe ocacileyo, kunye neMinyango yamaplanga kunye nokubumba kumbala waseBrazil waseWalnut. Iziqwenga zefanitshala zenziwe ngerattan yendalo ephothiweyo enamalaphu anobungqina bemozulu.
Le patio enkulu yegadi idibanisa iintlobo ezahlukeneyo zokugqitywa kunye nezixhobo. Izitepsi ezikhokelela kwipatio ephezulu zigqityiwe nge-grazzo ekhanyayo, ngelixa amacala endawo ephakanyisiweyo enxitywe ngamatye endalo. Indawo yepatio ngokwayo isebenzisa iiplanga zomthi oqinileyo odibeneyo kunye neebhodi zokuncamathela zebhodi eqhotyoshelweyo. Uninzi lweentyatyambo ezintle zikhanyisa indawo yepatio kwaye zibonelela ngombala omninzi.
Indawo enesetyhula yangaphandle yepatio eneeparacotta pavers kunye neziko lomlilo. Ikwabonisa umdla we-gazebo weplanga onombala omhlophe kwaye usebenzisa ifanitshala yeplanga eqinileyo epeyintiweyo ngombala we-beige okhanyayo kunye ne-cream upholstery.
Kule ndawo yepatio egutyungelweyo, izinto ezisemgangathweni ezisetyenzisiweyo ziithayile ze-ceramic ezikhanyayo kunye negrout enkulu. Amanqwanqwa kunye nokufika okukhokelela kumnyango wokungena usebenzisa iithayile zamatye endalo ezinemibala, ngelixa amacala ayo egqunywe ngamatye endalo ahlanganiswe ngekhonkrithi. Iindonga zigutyungelwe ngolwimi kunye ne-groove ngamaplanga aqinileyo e-walnut etshayiweyo. Ibhokisi yokutyala eyenziwe ngomthi ihleli ngaphezulu kwesingqengqelo sangaphandle esenziwe nge-resin wicker kunye nosihlalo wokugungqisa i-resin, itafile, isihlalo kunye ne-ottoman.
Kule ndawo evulekileyo ye-balcony / ye-patio kusetyenziswa iithayile ezinkulu zamatye angwevu kumgangatho wayo, zidityaniswe neethayile ezincinci zeceramic kwithoni yomthi yokugqiba kunye nombala. Iindonga zipeyintwe ngombala obomvu ongqindilili, kwaye iziporo zicocekile ngeglasi enomsindo, yandisa umbono.
Umgangatho olungileyo wekhrimu yetreyini ehamba emgceni kule patio ine-counter-bar bar counter counter emnyama nebala elimhlophe. Iikhabhathi zayo / iidrowa zambathiswe ngomthi osikwe kubungakanani kunye nokubekwa kweetena zezitena. Ikwanayo nembonakalo entle yegazebo kwimozulu eqinileyo ephathwe ngeteksi enembonakalo yolwandle. Itafile entle yokutyela ngaphandle kunye nesihlalo zibekwe embindini wesithuba. Ikhitshi elingaphandle lihleli ecaleni kwaye libonisa indawo yokuntywila kunye neyokulungiselela ukutya.
Indawo epatiweyo egutyungelwe kakhulu enemigangatho ekhonkrithiweyo kunye namatye anzima okubopha isiqingatha seendonga zangaphandle. Zonke ezinye iindonga zipeyintwe ngombala we-beige enomnyango omhlophe-opeyintwe ngefestile kunye nokubumba. Izitulo zentsimbi zangaphandle ezinamakhamandela agqithisileyo kunye neetafile ezilinganayo zibekwe kwindawo yeziko elihlala umlilo, kwaye ziphumle kumbhoxo omiselweyo.
Uyilo lwala patio yanamhlanje lisebenzisa iiplanga zemithi zemozulu zomgangatho wazo kumbala omnyama womgcini. Iifreyimu zomdaniso, iikholamu zomthi kunye nophahla zonke zipeyintwe ngombala omhlophe, kunye nefanitshala emhlophe egutyungelwe ngumgubo wefenitshala yentsimbi. Ukwahlulahlula iglasi okunesitayile okwahlula indawo yedama kwipatiyo.
Ipatio encinci kunye nephangaleleyo ejonge echibini ngeethayile ze-cream ze-porcelain ezikhanyayo kunye nepeyinti ekhanyayo yeendonga zayo. Yakhelwe ngaphakathi kwiikhawuntala zekhabinethi yasekhitshini eneengcango zeglasi ezinekhephu kunye nezinto ezimhlophe zokubala umphezulu. I-grill enkulu ye-barbecue engenasici, kunye nekhitshi yangaphandle egqibeleleyo kunye nesinki ifanelekile kwiintsuku zehlobo. Ibhentshi yanamhlanje yepikniki enezihlalo ezimhlophe eziphakanyisiweyo kunye netafile yeplanga epholileyo inika indawo yokonwabela isidlo esimnandi ngaphandle.
Indawo enepatio enelanga ibonelela ngendawo yokuphumla kunye neembono ezibanzi zeli chibi elijikelezileyo. Ibhalkhoni enkulu evulekileyo yanamhlanje ene-30 × 30 emhlophe iithayile zokulwa nesiliphu kunye neendonga ezipeyintiweyo ezimhlophe namnyama ngombala. Ifanitshala esetyenzisiweyo isebenzisa isinyithi esigalelwe umgubo ngamaqhekeza omthi aqinileyo. Xa usiza nemibono yoyilo yepatio kubalulekile ukuba ujonge imeko yendalo ekuyo ukuze uqiniseke ukuba unemithunzi eninzi okanye uyigqumelele kwimozulu enelanga kunye nemvula.
Ipatiyo entle yegadi kunye ne-terrazzo flooring esebenzisa amatye amancinci omlambo. Ikwanayo ne-trellis eqinileyo yomthi kunye nezitena ezibomvu ze-terracotta, kunye neepeyinti ezenziwe ngwevu ezingwevu zodonga lwangaphandle. I-pergola yegadi ihleli ecaleni kwaye igutyungelweixilongo elibomvu iintyatyambo zomdiliya kwaye ungeze kubuhle bendawo.
Ipatio enkulu yanamhlanje eneethayile zelitye lendalo kwi-30 × 60 yokusika kunye nepateni ebalekayo yokubopha. Indawo igqunywe ngeglasi yefayibha yokukhusela indawo kubushushu nemvula. Ikwasebenzisa iithowuni ezahlukeneyo zomthi kunye nezinto zokwenza izixhobo zayo zefanitshala. Ukuthuka komgangatho omncinci womthi kujongeka kuyinto entle kwaye kukhuselekile kubantwana abancinci kunokubhengeza ngokubanzi. Imiqamelo ebomvu yenza uluvo xa lubekwe kwimpahla emhlophe yesingqengqelo esingaphandle kunye nosihlalo.
Ipatio yangaphandle eneemvakalelo zendalo, isebenzisa amatye akhululekileyo kunye namatye omgangatho phantsi kwayo endaweni yeethayile ezizinzileyo okanye izinto ezixhonyiweyo ezifulelwe ngomthi ezimhlophe kunye nokufezekisa ifanitshala yeenkuni ezimhlophe. I-canopy ekhangeleka ngokhuni kunye nokunyuka kwemidiliya kunika indawo yothando.
Le patio inembonakalo yolwandle entle kule ndawo ivulekileyo yebhalkhoni. Imigangatho isebenzisa ukhilimu okhanyayo we-terrazzo kunye neendonga zayo zangaphandle zisebenzisa i-clapboard shingles ezinyangiweyo ukuba zinganyangeki ukufuma. Imizila eyenziwe ngomthi kwaye ipeyintwe ngombala okhanyayo okhanyayo. Izibane zevaranda zesitayile sendabuko ziyayinyusa indawo ebusuku.
Indawo yepatio yanamhlanje ekhangeleka ngokwaneleyo ukuba ibe yindawo yokuhlala yangaphakathi. Iindonga zimhlophe qwa ngombala, kunye nokukhanya okungwevu kweethayile zomgangatho weceram. Iingcango ezilahliweyo ezimnyama kunye nezivalo ezimhlophe zahlula ngaphakathi endlwini kwindawo yepatio. Ifenitshala yepatio emnyama eyenziweyo kuyilo lwangoku inika le ndawo ukuba ibonakale.
Ipatio evulekileyo isebenzisa izitena zokubamba izitena kwipateni yokuluka impahla yayo, zidityaniswe nezitena ezimhlophe ezihlanjwa kumzekelo wokuluka kwindawo yayo yomlilo. Iindonga ezingaphandle zendlu zikwanxityiswe kwinto efanayo neziko lomlilo.
Indawo yokubhukuda ibonelela ngamathuba amaninzi emibono yoyilo lwepatio. Le yindlu yokuphumla yangasemva kweephuli inebala elibomvu le-ceramic kunye ne-cement grouting kunye nomthunzi oqaqambileyo welaphu kumbala ofudumeleyo omdaka. Iziqwenga zefanitshala zisebenzisa izinto ezifanelekileyo zangaphandle (zokwenziwa kweerattan) ngelixa icala lechibi lisebenzisa iithayile zelitye lekalika kunye neethayile zomda we-mosaic. I-cabana efulelweyo yenza indawo entle yokubuyela elounging, kwaye umthombo omkhulu wokuhombisa wonyusa ubuhle kunye nomoya.
Ipatio enembonakalo entle esecaleni lolwandle, isebenzisa iithayile zelitye zendalo kwimigangatho yayo enezinto zokulwa nesiliphu kwaye isebenzisa ilitye lekalika ngobungakanani bezitena ukugqibezela ukujikeleza kwayo ngeebalusters ezimhlophe zepeyinti.
Le patio ibonelela ngombono omkhulu wolwandle kunye nokucacisa ngokucacileyo kweglasi kunye nokuhombisa imivalo yentsimbi engenasici. Imigangatho yayo isebenzisa iithayile zendalo zeceramic ezineempawu zokuthintela ukutyibilika kunye neziqwenga zefanitshala zangaphandle ezisebenzisa iirattan zokwenziwa kunye nezinto eziqinisa imozulu.
Indawo yepatio / indawo yebarbecue enemigangatho yesikwere kunye nezikhewu ezinkulu ezivumela ukukhula kwendalo kwengca. Inodonga olusisigxina oluboshwe ngamatye emilambo endalo kunye namatye asikiweyo endalo. Iindonga zigcina ukugqitywa okurhabaxa kwaye zipeyintwe ngombala otyheli, zikunika imvakalelo yaseMeditera yanamhlanje.
Le patio yegadi yanamhlanje ejikelezwe bubomi bezityalo kwaye ikufihla elangeni kunye ne-trellis yayo emhlophe epeyintiweyo. Imigangatho isebenzisa ikhonkrithi egqityiweyo kunye nonyango oluthintela isiliphu engwevu kunye nokukhanya okungwevu, icwangciswe ngokwahlukeneyo.
Indawo egudileyo yepatiyo esebenzisa imigangatho ekhonkrithi egalelwe ngombala wentlabathi. Iindonga zipeyintwe ngombala ofanayo kumgangatho, kwaye iziqwenga zefanitshala zisebenzisa izinto zokwenziwa ezilukiweyo endaweni yeRattan. Ibhari yetiki kunye nendawo yasekhitshini engaphandle kodonga ibonelela ngefriji encinci, kunye nendawo yokuxuba iziselo kunye nokulungiselela ukutya kwi-barbeque.
Le patio ijongeka icolile kwaye ikhangeleka ngathi ligumbi lokuhlala ngaphakathi. Umgangatho wenziwe ngomthi oqinileyo weCherry kwaye iindonga zinxitywe ngezitena zangaphantsi ezibomvu zeterracotta, ezaliswe yindawo yokubasa umlilo enethayile zamatye kunye negumbi lokuhlala elihle elingaphandle. Izityalo ezincinci ezinamanzi zongeza okuluhlaza okwahlukileyo kwaye zahluke kakuhle ngokuchasene nobomvu kunye nomdaka.
Kule patio ivulekileyo, iinkuni ezibuyiselweyo ezanyangwa ngemozulu zazisetyenziswa njengemigangatho yokuhombisa. Ikwanazo neziqwenga zefanitshala ezisebenzisa iirattan eyenziweyo ukuze ikwazi ukumelana naxa imanzi.
Indawo yokuphumla echibini ijikeleze umbono oqinisekileyo wendalo. Imigangatho yayo yonke indawo engaphandle isebenzisa ukusika kwesikwere esikhulu kugalelwe ikhonkrithi ebomvu ebomvu. Izitulo zeLounge zenza indawo efanelekileyo yokuphumla ngomlilo ongaphandle ukuze uthathe indawo yokuzihlaziya.
Le patio yegadi yanamhlanje ibonelela ngombono omangalisayo wobume bendawo kunye nephuli. Ineethayile ezinkulu ezimhlophe zeceramic kumgangatho wayo kunye nepeyinti efudumeleyo engwevu yeendonga kunye neentsika. Isilingi yepatiyo ineeplanga zeenkuni ze-Oak zegolide ezincediswe ziinkxaso zomthi kumbala ofanayo weentsika. Itafile enkulu yokutyela ngaphandle inika indawo eninzi yokonwabela isidlo kunye nokuzonwabisa.
Ipatio entle ephefumlelweyo yaseAsia enemigangatho ethandekayo yomthi egqityiweyo kumnyama mahogany kunye nophahla olugqunywe ngeplanga yomthi wobunjineli kwisiphelo seTeak. Oku kufakwa ngescreen somthi ogqunywe ngokugqitywa komthi weti teak uyilo oluntsonkothileyo.
Uyilo lwala maxesha lweepatio elisecaleni elisebenzisa iithayile zeceramic ezingashukumiyo njengesixhobo saso esisezantsi esiya kufikelela kwindawo esecaleni lephuli. Ukuthungwa kweglasi okucaphukileyo kunika umbono ongaphazanyiswanga echibini, kwaye isisitheliso esinokurhoxiswa senza uphahla lwepatio olukhawulezayo olunceda ukugcina indawo yomile emvuleni kwaye kude nobushushu belanga njengoko kufuneka.
Indawo yendawo yepatio inesibheno esihle se-rustic kunye nokusetyenziswa kwayo kweplanga yeplanga edibeneyo kunye ne-bleached. Iindonga zipeyintwe kuphela ngombala omhlophe, kodwa iivili zeplanga kunye nokugcwalisa i-trellis ngomthunzi welaphu kuyinika ukuziva kufana neeholide ezinomxholo waseAsia. Uphahla lwepatio yiporegola yokhuni enempahla yelanga.
Leli patio elisecaleni lophahla lisebenzisa i-PVC yokuhombisa imigangatho yayo kwindawo emnyama yaseMahogany, ngelixa isilingi sisebenzisa ulwimi olwenziweyo kunye neeplanga zomthi kwi-Walnut yaseBrazil. Ummandla wephuli unqamle ngeethayile zelitye lendalo ngombala ongwevu okhanyayo, ngelixa abanye beqhubeka nokusebenzisa i-PVC decking.
Ipatio egqunyiweyo enendawo yokubasa umlilo esebenzisa iithayile zendalo ezinkulu ezisisikwere, ngombala ongwevu. Indawo yokubasa umlilo yangaphandle kunye neekholamu zinxitywe ngamatye aqingqiweyo endalo ngombala we-beige / cream. Ifenitshala yangaphandle yanamhlanje eorenji namdaka iyancoma uphahla lwepatio olubonisa isigqumathelo somthi omkhulu ngaphezulu.
Le patio igutyungelweyo inendawo yokubasa umlilo ene-mantel kunye negumbi elininzi lokuhlala kwaye uphumle ecaleni kwephuli yokubhukuda. Ifeni yesilingi inceda ukugcina izinto zipholile kwiinyanga ezishushu zasehlotyeni. Ifenitshala ye-wicker eyenziweyo enemiqamelo ilungele iifenitshala ezizinzileyo ezinokuphatha ngcono ukukhanya kwelanga kunye nezinto zangaphandle.
Lo mmandla mhle wangaphandle wepatio usebenzisa iithayile zelitye lesanti enkulu kumgangatho wayo kunye nombala wokukhanya okhanyayo weendonga. Ifanitshala esetyenzisiweyo isebenzisa irattan kunye neblitshi yeenkuni. Izibane ezifihliweyo zibonelela ngokukhanya okuninzi kwaye zinokulawulwa ukuze zilungelelanise ukukhanya. Iintsika zokuhombisa zongeza kwi-aesthetics yendawo.
Uyilo oludidiweyo lwepatio yegadi esebenzisa istayile saseSpain i-terra cotta ebomvu iithayile zokwenza ikhonkrithi. Inombono omnandi wegadi kunye nendawo yeephuli, eneendonga ezimhlophe ezipeyintiweyo kunye nesilingi emhlophe emhlophe enamaplanga avelileyo. Ukunyuka kwemidiliya kuphucula indawo eluhlaza kwaye kuzisa igadi ngaphakathi.
Le patio isebenzisa umbala obomvu ikhonkrithi enestampu imigangatho yayo enemibala emininzi yeethayile yeendonga zayo. Imigangatho yahlulahlulwe yayizikwere kunye nomda wekhonkrithi onamatye. Ifenitshala emhlophe yangaphandle yeenkuni enombala omdaka ngombala kunye neepilo zisetyenziselwa ukuhombisa kunye nokuthuthuzela.
Indawo yendawo yepatio isebenzisa iithayile zelitye zaphantsi kunye nokusika kweetayile ezahlukeneyo kunye nobukhulu, zidityaniswe neendonga ezimhlophe kunye nophahla. Indawo yokubasa umlilo icacisiwe kunye neethayile zepeyinti ezipeyintwe ngesandla zaseMoroccan kwaye zenziwe ngumthi weplanga ohamba eludongeni lonke. Ipatio ijonge ngaphezulu kwechibi lamatye kunye ne-spa, kunye noluhlu olunqabileyo lweentaba ngasemva.
Le patio yanamhlanje yindawo eguqulwayo, kusetyenziswa iingcango ezityibilikayo ezinezivalo ezithe tyaba ukwenzela ukuba abasebenzisi bayo bakwazi ukuyiguqula ngokulula ibe yindawo yangaphakathi okanye yangaphandle. Imigangatho ineethayile ezikhanyayo ze-beige ceramic kwaye iindonga zipeyintwe ngombala okhanyayo okhanyayo. Ipatio egutyungelweyo ivulekela kumgangatho wolwandle ongaphambili onika elinye ithuba lokuphumla nokuthatha uluvo.
Ipatio esecaleni yeephuli esebenzisa iplanga emhlophe yodongwe. Indawo igqunyelelwe ngamaplanga neentsika ezenziwe ngomthi ezimhlophe-ezimhlophe, iseti egcwalisayo yefenitshala emhlophe yokwenziwa kweenwele kunye nemiqamelo eyingwevu.
ubungakanani begaraji esemgangathweni
ishawa yesiqingatha sodonga
ibhafu kwindawo yokuhlamba
iintlobo zeentyatyambo zomtshato